ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကလေး ကျေးရွာ နတ်ကုန်းဘက်က ကလေးတွေတဲ့ ( သနားလိုက် တာကွယ် ) – Let Pan Daily
ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကလေး ကျေးရွာ နတ်ကုန်းဘက်က ကလေးတွေတဲ့ ( သနားလိုက် တာကွယ် )
Let Pan | August 15, 2020 | Local News | No Comments
ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကလေး ကျေးရွာ နတ်ကုန်းဘက်က ကလေးတွေတဲ့ ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကလေးကျေးရွာ နတ်ကုန်းဘက်မှာတဲ့သူတို့လေးတွေတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ပေးချင်မိတယ်မိမိတို့အိမ်မှာ ပိုနေတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေကအစပေါ့…လှူချင်တဲ့သူများရှိရင်ရင် လှူပေးကြပါလားလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်…အရင်လိုပရဟိတမလုပ်နိုင်တော့ပေမဲ့ တတ်နိုင် သလောက်တော့ ကူညီချင်မိလို့ပါ…
ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကလေးကျေးရွာနတ်ကုန်းကပါ ပေးဆပ်သူအဖွဲ့က ကိုလပြည့်(09796640893)သို့ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည် တတ်နိုင်သလောက်လေးတွေ ကူညီပေးလို့ရပါတယ်ကလေးတွေရဲ့ နေရေးထိုင်ရေးနဲ့ အဝတ်အစားလေးတွေတတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးလို့ရပါတယ် ကလေးတွေက အဖေပဲရှိပါတော့တယ် .. အမေကတော့ ဆုံးပါး သွားပါပြီ….
နိုင်သည်ဝန်ဖြင့်ကူညီလှူဒါန်းပေးကျပါရှင့်…ဆက်သွယ် လှူဒါန်းလိုပါက…….ပေးဆပ်သူ သွေးတာဝန်ခံ ကိုလပြည့် 09. 796640893
Hpn.an black pearl gp သားသား 09. 786407773 လှူဒါန်းပစ္စည်းများအား လာယူဆိုလဲယူပေးပါ့မယ်ရှင့်
လာယူပေးရမယ်ဆို ဆက်သွယ်ရမဲ့ လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေး Cb မှာ လာပို့ပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်
ကရငျပွညျနယျ မွိုငျကလေး ကြေးရှာ နတျကုနျးဘကျက ကလေးတှတေဲ့ ( သနားလိုကျ တာကှယျ )
ကရငျပွညျနယျ မွိုငျကလေး ကြေးရှာ နတျကုနျးဘကျက ကလေးတှတေဲ့ ကရငျပွညျနယျ မွိုငျကလေးကြေးရှာ နတျကုနျးဘကျမှာတဲ့သူတို့လေးတှတှေကျ လိုအပျတာလေးတှေ ပေးခငျြမိတယျမိမိတို့အိမျမှာ ပိုနတေဲ့အဝတျအစားလေးတှကေအစပေါ့…လှူခငျြတဲ့သူမြားရှိရငျရငျ လှူပေးကွပါလားလို့ မတ်ေတာ ရပျခံခငျြပါတယျ…အရငျလိုပရဟိတမလုပျနိုငျတော့ပမေဲ့ တတျနိုငျ သလောကျတော့ ကူညီခငျြမိလို့ပါ…
ကရငျပွညျနယျ မွိုငျကလေးကြေးရှာနတျကုနျးကပါ ပေးဆပျသူအဖှဲ့က ကိုလပွညျ့(09796640893)သို့ဆကျသှယျလှူဒါနျးနိုငျပါသညျ တတျနိုငျသလောကျလေးတှေ ကူညီပေးလို့ရပါတယျကလေးတှရေဲ့ နရေေးထိုငျရေးနဲ့ အဝတျအစားလေးတှတေတျနိုငျသလောကျ ကူညီပေးလို့ရပါတယျ ကလေးတှကေ အဖပေဲရှိပါတော့တယျ .. အမကေတော့ ဆုံးပါး သှားပါပွီ….
နိုငျသညျဝနျဖွငျ့ကူညီလှူဒါနျးပေးကပြါရှငျ့…ဆကျသှယျ လှူဒါနျးလိုပါက…….ပေးဆပျသူ သှေးတာဝနျခံ ကိုလပွညျ့ 09. 796640893
Hpn.an black pearl gp သားသား 09. 786407773 လှူဒါနျးပစ်စညျးမြားအား လာယူဆိုလဲယူပေးပါ့မယျရှငျ့
လာယူပေးရမယျဆို ဆကျသှယျရမဲ့ လိပျစာနဲ့ဖုနျးနံပါတျလေး Cb မှာ လာပို့ပေးလို့ရပါတယျရှငျ့
နေ့ခင်းကြောင်တောင် သွေးအေးအေး နဲ့ ရက်ရက် စက်စက်သတ်သွားတဲ့ တရားခံ ဖမ်းမိ
ဆယ်တန်းအောင် စာရင်းများ ထုတ်ပြန် ရက် တရက်နောက်ကျပြီး မှ ဆိုင်ရာကျောင်း များတွင် ကပ်မည်
ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ရင် ဘာတွေ လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်ရန် / ရှောင်ရန်တွေ ကို ဆရာကြီး ဦးတင်ညွှန့် ပြောပြီ